← अर्थमन्त्रीलाइ परिक्षामा चिट
बन्ला त समयमै नयाँ संविधान ? →
के गर्दैछन् ओली दिल्लीमा ?
नेपालको सिमानामा भारतले गरेको अतिक्रमण तथा सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई दिएको सास्तीको समाचारमा सत्यता नभएको भनी राष्ट्रविरूद्द काम गर्नेमा भारतभक्त दलालहरू सरकारमा छंदै छन् ।
ओलीले यस बाहेक भारतमा कुन-कुन डाक्टर संग भेट गर्ने हुन् र कस्तो स्वास्थ्य लिएर नेपाल भित्रिने हुन् त्यो त समयले नै देखाउला ।
One response to “के गर्दैछन् ओली दिल्लीमा ?”
जुन 18, 2009 at 1:02 बेलुका
Oh OLI Lai Utai Goli khuwauna parne kina Nepal return garne ???